Unogada uqothe (6) egajwe yisikhwele - Ilanga News
Home Izindaba Unogada uqothe (6) egajwe yisikhwele
Unogada uqothe (6) egajwe yisikhwele
Ubengafuni ukwamukela ukuthi ucu kalusahlangani kunina wengane yakhe
UBENGAFUNI ukwamukela ukuthi ucu kalusahlangani phaka-thi kwakhe nonina wengane yakhe, unogada waseMatimatolo, eGreytown, odubule wabulala abantu abawu-6 eMooi River ngoMgqibelo, okukhona kubona nendodana yakhe.
Kubikwa ukuthi uMnu Nhlalayenza Zulu (26), obesebenza eMooi River – ogcine edutshulwa ngama-phoyisa wafa – ubehluleka wukwamukela ukuthi unina wengane yakhe, uNkz Thandiwe Duda (25), akasayingeni indaba yakhe.
Silobe izolo ngeSonto uNkz Duda ebangwa nezibi esibhedlela. Abashonile kulesi sigameko nguNkz Sibusisiwe Duda (34) ongumlamu kaMnu Zulu, uSamkelo Duda (5), indodana yakhe, uVu-yiswa Duda (5) no-Emihle Ndlela (13) obevakashile, uMnu Bongani Nene (40) onguzakwabo kaMnu Zulu noMnu Wandile Shabalala (42) – naye ongunogada – umbulali abesola ukuthi usethandaba noNkz Duda.
UMnu Themba Duda ongumfowabo omdala kaNkz Duda, utshele ILANGA ukuthi bese kuphele iminyaka emibili udadewabo wahlukana noMnu Zulu ngoba ekhala ngokuthi uyamhlukumeza ngoku-mshaya.
“Kwenzeka lokhu nje, udadewethu ubesanda kumfunela incwadi yesivimbelo sasenkantolo ngoba ubeseqale phansi ukumhlasela, efuna babuyelane ngenkani. Emasontweni amabili edlule, waze wamphuca isikhwama sakhe, wathatha namakhadi akhe, emphoqa ukuba babuyelane.
“Ngesonto eledlule udadewethu uSibusisiwe, wathatha izingane bahamba, bayovakashela elokishini emzini kadadewethu omdala. Kuthiwa umsolwa ubonile ukuthi ingane yakhe ivakashele kunina wayo omdala ngalapho eqashe khona. Wayegcine ukuyibona emuva kokuhlukana nonina.
“Ngibikelwe ukuthi ngoMgqibelo udadewethu omdala nomyeni wakhe, bavuke baya Estcourt
kukhona abayokulungisa, washiya uSibusisiwe nezingane endlini. UThandiwe ubesemsebenzini ejalidini ngaleso sikhathi.
“Sithole ukuthi uyise wengane yakhe ugile le mihlola nje, beku-mele ngabe uyongena emsebenzini. Kuthiwa kufike omunye uza-kwabo ongunogada eyomlanda, ehamba ngemoto yomsebenzi, okuthe besendleleni wamjikela, wamdubula, wambulala.
“Uthathe isidumbu sakhe wayosiphosa ehlathini, emuva kwalokho wathatha imoto yomsebenzi okuyiyona into abeyidinga.
“Usuke lapho wadlulela ejalidini okusebenza kulona unina wengane yakhe, wamfonela ukuba aphume, kunento ebalulekile afuna bayixoxe.
“Sithole ukuthi uThandiwe uphume wama ngaphandle kwesango, okuthe uma esabingelela, uyise wengane yakhe waphendula ngenhlamvu.
“Umdubule ephindelela, waqeda lapho wangena emotweni waqo-nda emzini kadadewethu omdala, lapho bekuvakashele khona indo-dana yakhe nomunye udadewethu.
“Ufike khona wangakhuluma lutho, wadubula uSibusisiwe obehleli nezingane maqede wadlulela kuzona,” kusho uMnu Duda.
Uthi uqede lapho washaya imoto wayodubula omunye wesilisa abesola ukuthi uthandana nonina wengane yakhe, wabe eseshaya imoto eyibhekise ngakubo
Amaphoyisa abikelwe ngowesilisa okuthiwa uyingozi, usedubule abantu eMooi River, okuthe uma ezama ukumisa imoto wangezwa mshini, wazama ukuwadubula kodwa kwagcina kushone yena.
“Le nto eyenziwe yile ndoda kuyabonakala ukuthi ibisiyihlelile. Sizwe ukuthi wayibona ingane yakhe ngoLwesine ukuthi ivaka-shele kanina omdala, wathola ithuba lokuthi enze into efana nalena.
“Udadewethu ubehlale esho ukuthi lo mfana unenhliziyo embi, echaza izinto ezimbi ayezenza
kuyena ngesikhathi besathandana. Waze wamala nje, yingoba wayese-khathele, ebalekela khona ukuthi angaze agcine embulele,” kusho uMnu Duda.
Uthi udadewabo ungeniswe egunjini labagula kakhulu, isimo sakhe sisibi, kodwa odokotela bamthembisile ukuthi uzolulama.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uBrigadier Jay Naicker, uthe amaphoyisa avule amacala awu-6 okubulala, elilo-dwa lokuzama ukubulala nedokodo lophenyo.
Previous articleKugqame ingxabano kubaqeqeshi beDowns
Next articlekubatshazwa unya kudutshulwa abesifazane